တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနှင့် ကပ်ရောဂါအလွန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ဝင်စား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့သည် ကပ်ရောဂါအလွန်ခေတ်တွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောထားဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒို (Joko Widodo) နှင့် တယ်လီဖုန်းပြောကြားရာတွင် ရှီက နှစ်နိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပုံစံအသစ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အလယ်အလတ်နှင့် ကာလရှည် အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပေါင်းစပ်လျက်ရှိကြောင်း ရှီက အကြံပြုခဲ့သည်။
ယမန်နှစ်မှစ၍ တရုတ်-အင်ဒိုနီးရှား ဆက်ဆံရေးသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါအား ဆန့်ကျင်လျက် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းစဉ်တွင်ပင် ရှေ့ဆက်ချီတက်လျက်ရှိကြောင်း ရှီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံတို့သည် အဆင့်မြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုယန္တရားကို ကြေညာခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းရေးရာများ၏ “မောင်းနှင်အား လေးခု” ၌ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပုံစံအသစ် ထူထောင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့သည် အဓိကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများဖြစ်ကြပြီး နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လိုက်လျှောက်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ပြည်သူများအတွက် ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေခြင်း၌ အလားတူ စံနမူနာများနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများရှိကြောင်း ရှီက ဆိုသည်။
ရာစုနှစ်အတွင်း အဓိက ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ကပ်ရောဂါ နှစ်ခုလုံးကို ရင်ဆိုင်လျက် တရုတ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှား နှစ်နိုင်ငံတို့သည် ကံကြမ္မအကျိုးတူ အသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်းပန်းတိုင်ကို ရရှိရန် အဓိကအချက်မှာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်သော အရာများ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကောင်းမွန်ပြီးမြောက်စွာ ရရှိရန်ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး အတူတကွလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ဥပမာကောင်းတစ်ခု ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရှီက အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်နှင့် ဆေးဝါးသုတေသနနှင့် ဖော်ထုတ်မှုမှတစ်ဆင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအား ဒေသတွင်း ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုဗဟို ဖြစ်လာရေး ကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှု မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကပ်ရောဂါပူးတွဲတိုက်ဖျက်ရေးပေါ် အခြေခံ၍ အားလုံးအတွက် ကျန်းမာသော ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် အင်ဒိုနီးရှားနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံတို့သည် ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လိုက်လျှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် စံပြတစ်ခု ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
အရည်အသွေးမြင့် ဂျကာတာ-ဘန်ဒေါင်း အမြန်ရထားလမ်း တည်ဆောက်ရေး၊ ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးစင်္ကြံ နှင့် “နှစ်နိုင်ငံ၊ ပန်းဥယျာဉ်နှစ်ခု” (“Two Countries, Twin Parks”) စီမံကိန်း စသည့် အဓိကကျသော အစီအစဉ်များကို လေးလေးနက်နက် အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် စွမ်းအင်သစ်၊ ကာဗွန်လျှော့ချခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဲ့သို့ တိုးတက်မှုနယ်ပယ်အသစ်များ မြှင့်တင်ရေး ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက် ရှီက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရန်နှင့် တရုတ်-အင်ဒိုနီးရှား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ၎င်း၏ ခွန်အားရှိသမျှအလုံးစုံဖြင့် တက်ကြွစွာပါဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကအလေးထားပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာများတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အခန်းကဏ္ဍအား တန်ဖိုးထားမှတ်ယူကြောင်းနှင့် ယမန်နှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သော တရုတ်-အာဆီယံ အထိမ်းအမှတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ ရရှိခဲ့သော သဘောတူညီချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ ဒေသတွင် စီးပွားရေးနာလန်ထူမှု မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အင်ဒိုနီးရှားနှင့်အတူတကွ ဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ရှီက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့သည် ယခုနှစ်တွင် BRICS နှင့် Group of 20 (G20) ၏ ဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနှင့်အတူ စစ်မှန်သော နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဝါဒကို ကျင့်သုံးရေး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆောင်ရွက်ချက်အား တက်ကြွစွာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ ပေါ်ထွန်းစဈေးကွက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ အကျိုးစီးပွားများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနာလန်ထူမှု မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှု မြှင့်တင်ခြင်းအပေါ် အထောက်အကူပြုရေးအတွက် အတူတကွ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဝီဒိုဒိုကလည်း ၁၉ ကြိမ်မြောက် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ၊ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးအား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်သည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်း၊ တရုတ်ပြည်သူများအနေဖြင့် သမ္မတ ရှီ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ဂုဏ်ကျက်သရေသစ်များ တိုးပွားရရှိမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယမန်နှစ်က နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အထူးသဖြင့် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆေးဝါးသုတေသနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှာ အသိအမှတ်ပြုလောက်ဖွယ် ရလဒ်များ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေး၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျကာတာ-ဘန်ဒေါင်း မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းတည်ဆောက်ရေးသည် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အဆင့်မြှင့်တင်လျက်ရှိပြီး စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ပြီးစီးမည်ဟုမျှော်လင့်ကာ အများပြည်သူများသွားလာရန် ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနှင့် တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကြား ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးသည် အပြန်အလှန်လေးစားမှုနှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ကပ်ရောဂါတုန့်ပြန်ရေးကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာစေရန်၊ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တက်ကြွစွာမြှင့်တင်ရန်နှင့် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးစင်္ကြံ တည်ဆောက်ရေးနှင့် “နှစ်နိုင်ငံ၊ ပန်းဥယျာဉ်နှစ်ခု” စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားလိုကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းတို့နိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား အင်ဒိုနီးရှားတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့် နည်းပညာမြင့်၊ အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အခြားသောနယ်ပယ်များ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ရန် ကြိုဆိုကြောင်းလည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ယခုနှစ်၏ G20 ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ အဖွဲ့အစည်းအုပ်စုက နိုင်ငံတကာစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနာလန်ထူမှု မြှင့်တင်ရာတွင် တက်ကြွသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြည်သူများအား ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နွေဦးပွဲတော်ဖြစ်ပါစေကြောင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပေကျင်း ဆောင်ရာသီ အိုလံပစ်နှင့် မသန်စွမ်းအိုလံပစ်အား အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#China, #Indonesia, #XiJinping, #JokoWidodo, #Post_Pandemic, #Cooperation, #Xinhua, #Myanmar,
Inaphone conversation with Indonesian President Joko Widodo, Xi suggested that the two sides integrate Belt and Road cooperation with China’s building ofanew development pattern and Indonesia’s medium- and long-term national development plan.
The two countries, he added, have launchedahigh-level dialogue cooperation mechanism, and establishedanew pattern of bilateral cooperation on the “four-wheel drive” of political, economic, cultural and maritime affairs.
He called for joint efforts to build the Jakarta-Bandung High Speed Railway with high quality, earnestly implement such key programs as the Regional Comprehensive Economic Corridors and the “Two Countries, Twin Parks” project, and foster such new growth areas as new energy, decarbonization, digital economy and maritime cooperation.
China, he stressed, will actively participate with all its strength in anything that is conducive to promoting Indonesia’s development and deepening China-Indonesia cooperation.
Xi said China attaches great importance to Indonesia’s role in regional and international affairs, and stands ready to work with Indonesia to implement the consensus reached at last year’s China-ASEAN commemorative summit, promote regional economic recovery and safeguard regional peace and stability.
For his part, Widodo extended congratulations on the success of the sixth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China, saying he believes that the Chinese people will continue to achieve new glories under Xi’s leadership.
Last year, bilateral trade and investment grew rapidly, and health cooperation — especially cooperation in vaccine production and drug research and development — achieved remarkable results, he said, noting that 80 percent of Indonesia’s vaccines came from China.
Indonesia, he said, is willing to work with China to strengthen cooperation in such fields as economy, trade and pandemic response, actively promote Belt and Road cooperation, and advance the building of the Regional Comprehensive Economic Corridors and the implementation of the “Two Countries, Twin Parks” project.
He also wishes the Chinese peopleahappy Spring Festival, and China success in hosting the Beijing Winter Olympics and Paralympics. ■
Photo : Chinese President Xi Jinping (R) meets with his Indonesian counterpart Joko Widodo in Osaka, Japan, June 28, 2019. (Xinhua/Pang Xinglei)